राफेल सबातिनी, १143 बर्षको उत्कृष्ट साहसिक उपन्यास | वर्तमान साहित्य
आज पूरा भएको छ 143 वर्ष को जन्म को राफेल सबातिनी, एक महान लेखक को साहसिक उपन्यासहरू। यस अ author्ग्रेजी आमा र इटालियन बुबाका लेखकले विधाका केही सब भन्दा राम्रा र याद भएका शीर्षकहरूमा हस्ताक्षर गरे। असम्भव छ कि उसले आफ्नो फिल्म रूपान्तरणमा पढेको वा देखेको छैन कप्तान रगतको सी हज oa Scaramouche। त्यसोभए उनको जन्मदिन मनाउन हामी उहाँहरूका केही कथाहरू र उनीहरूका संस्करणहरू ठूलो पर्दामा सम्झौं।
1 राफेल सबातिनी
3 चार फिल्म संस्करणहरू
4 कप्तान रगत
5 समुद्री बाज
6 कालो हंस
7.1 थप शीर्षकहरू
म को लागी डर छ नयाँ पुस्ता राफेल सबातिनीको नाम उनीहरूलाई धेरै वा सम्भवतः केहि जस्तो लाग्दैन। तर हामी मध्ये सबै जो पहिले नै एक उमेरका हो र पढाइ र सिनेमा मा बच्चाहरु swashbuckling थिए Sabatini छ सबै भन्दा राम्रो साहसिक का पर्यायवाची। हामी सम्भवत पहिले उसको काम जान्दछौं सिनेमा भन्दा पनि साहित्यलाई धन्यवाद, जब हलिवुडमा असंख्य शक्तिहरूको साथ धेरै सुपर हीरोहरू थिएनन् र समुद्री डाकूहरू वास्तविक थिए।
Sabatini को थिए मासु र रगत, तिनीहरूले तरवार चलाए र समुद्री डाकू जहाजहरू। थप रूपमा, तिनीहरू अन्य समयका हुन् र रहस्यको एक प्रभामंडल थियो वा तिनीहरूको पहिचान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। वा उनीहरू मास्क वा मास्क लगाउँथे र सँधै राम्रोसँग खतराबाट बाहिर आउँथे र खलनायकलाई कर्तव्यमा हराउँथे।
सबातिनी पनि यसका लेखक थिए छोटो कथा र जीवनी, तर विशेष गरी t का ती उपन्यासहरूकोऐतिहासिक प्रकार, धेरै साहसिक र एक धेरै सटीक कागजातको साथ। सायद हालको क्याननहरूद्वारा उसको शैली, केहि मिति भएको छ, तर उनको सामग्री छैन र एक साहसी कथाकारको सार पनि छ।
सबतिनीको फेब्रुअरी १ ​​13, १ 1950 .० मा निधन भयो Adelboden, स्विस। उनको दोस्रो पत्नी, उनको मृत्यु पछि, वाक्य थियो जुन संगै उनको काम आफ्नो चिहानमा लेखिएको छ Scaramouche: "उहाँ हाँसोको उपहार र संसार पागल भएको अन्तर्ज्ञानको साथ जन्म भएको थियो".
उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरे, Ivonne को प्रेमिका, १ 1902 ०२ मा, तर यो एक शताब्दी पछि लगभग एक चौथाई पछि थिएन संग सफलता प्राप्त Scaramouche सन् १ 1921 २१ मा। फ्रान्सेली क्रान्तिमा सेट गरिएको, यो काम त्यस समयको सब भन्दा राम्रो विक्रेता थियो। सफलताको अर्को वर्ष संगठित हुनेछ कप्तान रगत.
कुलमा उनले प्रकाशित गरे Adventure१ साहसिक उपन्यासहरू, जसमध्ये धेरै फिल्म अनुकूलनहरू थिए। तर लिपिहरू कहिल्यै विश्वासी हुँदैनन् पुस्तकहरु र Sabatini लाई यी संस्करणहरू अस्वीकार गरियो। साहसिक उपन्यासहरूको अतिरिक्त, उनले प्रकाशित गरे Short छोटो कथा किताब र bi जीवनी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को। पनि लेखियो थिएटर, को एक अनुकूलन सहित Scaramouche.
चार फिल्म संस्करणहरू
हामीले तिनीहरूलाई हो अथवा हो भनेर देख्यौं। किनभने तिनीहरू भाग हुन् Hollywood०, s० र s० को दशकमा हलिउडको सबैभन्दा सफल काल्पनिक साहसी। किनभने एरोल फ्लान डाक्टर पिटर ब्लड समुद्री डाकू कप्तान बनेको रूपमा रगत अविस्मरणीय छ। यो पनि भित्र छ समुद्री बाज। किनभने यसले फ्लानको फलदायी सम्बन्ध र निर्देशक माइकल कर्टिज वा अभिनेताहरूसँग कार्यको रूपमा चिन्ह लगायो ओलिभिया डे हभिल्यान्ड, बासिल रथबोन वा क्लाउड वर्षा.
किनकि त्यो आँखा मास्क, धारीदार लेगिंगहरू र स्टुअर्ट ग्रेन्जर र मेल फेररको बीचमा अचम्मको तरवार द्वैद्व en Scaramouche वा जेनेट लेग र एलेनोर पार्करको अतुलनीय सुन्दरताहरू। किनकि यो हाम्रो सिनेफाइल मेमोरीमा फिक्स पनि छ कारेन र रातो स्कार्फमा टायरोन पावर मौरिन ओ'हाराको साथ केबिनमा कालो हंस। र किनभने अन्तमा हामीसँग ती कथाहरूसँग समय अझ राम्रो हुन सक्दैन।
त्यहाँ १ 1924 २XNUMX मा पहिलो संस्करण थियो, तर सबैभन्दा धेरै सम्झिएको यो हो माइकल कर्टिज, को 1935.
डाक्टर पिटर रगत उहाँ एक डाक्टर हुनुहुन्छ जसले पूर्ण रूपमा आफ्ना बिरामीहरूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ जो राजनीतिक समस्याहरूको छेउमा बस्नुहुन्छ। तर कहिले हुन्छ गलत तरिकाले देशद्रोहको आरोप उसको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। वेस्ट इण्डिजको दासको रूपमा पठाइएको छ, तर ठूलो कौशल र धूर्तताका साथ सम्पन्न भएकोले, ऊ भाग्न सफल भयो र डराउने समुद्री डाकू, क्याप्टन रगत बन्छ।
फेरी माइकल कर्टिजबाट जो सीधा भित्र फर्किए 1940 एरोल फ्लानलाई, यो गरेको दुई वर्ष पछि द वुड्सको रोबिन। अघिल्लो जस्तो, यो छ साहसिक र समुद्री डाकू विधाको अर्को क्लासिक.
को रोमांच बताउँछ Geoffrey thorpe, एक अंग्रेजी corsair, स्पेनिश जहाजहरूको आतंक। तिनीहरू मध्ये एक नजिक जब उनले डोना कब्जा कोर्डोबाको मारिया अल्भारेज, एक स्पेनिश कुलीन, जसको साथ उनी तुरुन्त प्रेममा पर्दछन्। जब रानी इ England्ल्याण्ड फर्कन्छ इलिजाबेथ I उनले उसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अभियानमा पठाउँछन् जसमा उनी स्पेनिशको हातमा पर्नेछन्।
उनको चलचित्रमा लगे हेनरी राजा en 1942 र यसको नायकहरू थिए टायरोन पावर र मउरेन ओ 'हारा अरूको बीचमा।
हामी सत्रौं शताब्दीमा फर्क्यौं जहाँ समुद्री डाकू थियो हेनरी मोर्गन उनी अ Cr्ग्रेजी क्राउन द्वारा जमैका टापुको गभर्नर नियुक्त भएका छन्। मोर्गन क्यारिबियन समुद्री डाँकुहरूको सफा गर्न चाहन्छ र त्यसैले आफ्ना दुई पूर्व सहयोगीहरूलाई मद्दतको लागि सोध्छ, चेतावनी र टमी ब्लू। तर ती मध्ये एक, कप्तान जरा, यो समूहमा सम्मिलित हुने छैन र विद्रोहीहरूको सहयोगमा पूर्व गभर्नरको छोरीलाई अपहरण गर्ने छ, जसले रक्तपातपूर्ण लडाई गर्दछ।
निर्देशक जर्ज सिडनी नेतृत्वमा 1952 यो संस्करण de लिपि धेरै परिवर्तन भयो सबातिनीको मूल उपन्यासको तुलनामा। तिनीहरूले यसमा तारांकित गरे स्टीवर्ट ग्रेन्जर, इलेनोर पार्कर, मेल फेरेर र जेनेट लेह.
हामी भित्र छौ फ्रान्स मा शताब्दी XVIII र फिल्म को रोमांच बताउँछ एन्ड्रे-लुइस मोराउ (स्टीवर्ट ग्रेन्जर), एक भोजका छोरा हरामी। फिलिप डी वालोमोरिन, आन्द्रेको सब भन्दा मिल्ने साथी, एक युवा क्रान्तिकारी हो जसको हत्या गरियो मार्क्विस डे मान्ने, एक महान र एक कुशल तलवारवाला। आन्द्रे बदला लिन शपथ खान्छ उनको साथीको मृत्यु र मार्कीसलाई मार्नुहोस्। समस्या त्यो हो कि द्वन्द्व पहिले तरवार चलाउन सिक्नु पर्छ.
यसै बीच, आन्द्रेले भेट्नेछन् Aline de Gavillac (जेनेट ले) जससँग उनी प्रेममा पर्नेछन्, तर उनी मार्क्विसको मंगेतर हो। आन्द्रे सामेल हुने काम समाप्त हुन्छ शोमेनको समूहमा जो उसलाई एक राम्रो तरवार चलाउन सिकाउँछ र उसलाई बदला लिन मद्दत गर्दछ।
Bardelys Magnificent। राजा भिडोरले १ 1926 २। मा सिनेमामा यो अनुकूलन गरे।
सैन मार्टिनको गर्मी
भाग्य को whims
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » राफेल सबतिनी, १143 वर्ष एक महान साहसिक उपन्यास
Recareo Castillo भन्यो
सत्य यो हो कि राफेल सबातिनी व्यावहारिक रूपमा अज्ञात लेखक हुन्, यद्यपि उनका एक पात्र चरित्रलाई जिउँदो राख्न जोड दिन्छन्, क्याप्टन रगत। म यो भन्छु किनभने भर्खरको फिल्म संस्करण, यो मलाई लाग्दछ, १ 1991 XNUMX १ को रसियन फिल्म हो। यदि त्यहाँका कोहीले साबतिनीलाई सम्झना गर्न चाहान्छन् भने उनीहरूले उनको उपन्यास "स्कार्माउचे" राखे तर यो त्यहाँ जान पाउँदैन।
जे भए पनि, जब स्वाद आउँदछ, न त उपन्यास (यद्यपि तिनीहरू राम्रो छन्) मेरो मनपर्दो छ। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेको भनेको के हो… के समस्या, मलाई कुनचाहिं सबैभन्दा मनपर्‍यो भन्ने निर्णय गरेर! त्यहाँ धेरै छन्, सत्य, "बेलारिन", "इस्लामको तरवार", "भेनिसियन मास्क", "बर्डीलिस द म्याग्निफिसिएन्ट", सूचीमा शीर्ष छ, यद्यपि म "स्ट्रौ म्यान" नामकरण गर्न रोक्न सक्दिन। मृत्युको थ्रेसोल्ड "," पाओला "," हतियारमुनि प्रेम "," हिडाल्गुआ "... आदेश बिना नै प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ, केवल म तिनीहरूलाई नामाकरण गरेको छु किनकी म तिनीहरूलाई सम्झन्छु। त्यहाँ कुनै कारण छैन कि "मधुशालाको नाइट", "समुद्रको बाज", "आइभन्नेका प्रेमीहरू", "स्यान मार्टेनको गर्मी", "भटकिरहेका संत", "कालो हंस", "यो रोमान्टिक राजकुमार "," भाग्यको स्वर "," बैल झण्डा "र" द मार्क्विस अफ काराबास "। हो, त्यहाँ सूचीमा समावेश नभएका धेरै छन्, तर यो किनभने मैले ती फेला पारेन, जस्तै कि म पढ्न चाहान्छु, God भगवानका कुकुरहरू Maybe (हुनसक्छ मैले यसलाई छोड्नु भन्दा पहिले भेट्टाउँछु, वा, यदि स्वर्ग अवस्थित छ र जस्तो म चाहन्छु, एक पुस्तकालय, यो त्यहाँ हुन सक्छ)।
ओह धन्यवाद! धेरै धेरै धन्यवाद! यस पोष्टले मलाई रमाईलो क्षण दिएको छ
Recareo Castillo लाई जवाफ दिनुहोस्